Voadika ny 31 Desambra 2018 10:36 GMT
Herinandro hafa mafana ny tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Bahrainita, ahitana bilaogera mitolona ao ambadiky ny fanentanana fanoherana ny sektarisma antsoina hoe Just Bahraini (Bahrainita fotsiny); ny hafa kosa vao tafaverina tamin'ny fialantsasatra lavalava; ary misy iray mankalaza ny andro nahaterahany (?)!
Eo amin'ny politika eo an-toerana, Mahmood Al Yousif mampahafantatra antsika ny zava-mitranga eny ifotony.
Tsy toa faly loatra izy fa voafidy noho ny tsy fisian'ny hafa ny vehivavy Bahrainita voalohany nahazo ny seza tao amin'ny parlemanta ka tsy nitsitsy ny teniny momba izany izy.
Nanova toeram-ponenana izy ka nifindra tany amin'ireo nosy Hawar, ireo tetezatany manankarena fiainam-borona (heverina ho tahirin-tany voajanahary ahitana ireo “(vorona lehibe mpihinana trondro)” monina mahazatra ao izany) sy fiainana an-dranomasina manankarena manodidina azy koa ahitana dugong manori-ponenana ho any amin'ny rano lalina manodidina ireo nosy. Ao amin'io faritra io dia 1.000 fotsiny ny mpifidy, ary tsy azoko antoka raha nisaina ihany toa ireo dugong sy ny [biby], saingy omeko tombony amin'ny fisalasalana ry zareo ary hilaza fa nandresy ara-drariny sy marina izy. Na izany aza, alohan'ny hanaovana izany tanteraka, tsy maintsy miaiky ny fikorontanako aho fa amin'ny fifidianana izay hiadiana ny seza tokana amin'ny fari-pifidianana tokana tokony manana kandidà roa farafahakeliny, ahoana no nahatonga ireo fiarahamonina ara-politika tsy nifoha tamin'ny zava-misy fa vonona horaisina i Hawar?
Tamin'ny fifidianana teo an-toerana nokarakaraina tamin'ny 25 Novambra, tsy faly ihany koa i Mahmood fa mbola nirotsaka indray ny mpitondrateny teo aloha – na dia efa nilaza aza izy tany am-boalohany fa tsy hirotsaka.
Ny fidirana amin'ny minitra farany, na dia te-hieritreretra aza izy fa mampihetsi-po, ny zava-misy fa tsara kokoa i Harry amin'izany. Na izany aza, ny fialantsiny dia hoe nanatrika ny fihaonambe niaraka tamin'Andriamanitra izy, tahaka ny nataony tamin'ny Ramadana rehetra tao anatin'ny 10 andro farany. Tsy fantatro izay noresahin'izy ireo (mihevitra aho fa resaka tokana antsisiny ihany izany raha manontany ahy ianao, ary i Dhahrani no manana ny martòa) saingy heveriko fa nandray ny resadresaka izy hoe tsy maintsy manao ny adidiny ara-panjakana ary mametraka ny ivohony eo amin'ny seza hoditra natokana ho an'ny filohan'ny antenimiera .
Eo amin'ny tontolon'ny bilaogy mamindra aretina, namindra ny aretina tany amin'ny rahalahiny Hani, izay monina any Angletera i Mahmood.
Amin'ity herinandro ity, milaza amintsika momba ny hadalana vaovao – iphones i Hani, mampiseho antsika horonantsary avy amin'ny fampisehoana talenta Japoney izay mahatonga azy hiari-tory ary mampahafantatra antsika mpanakanto vaovao.
Manao izany rehetra izany izy raha sahirana amin'ny fakàna sary dokambarotra Johnnie Walker!
Lavitry ny asa, mankalaza ny tsingerintaona nahaterahany i Blayde mahita mailaka marobe avy amin'ny forum misy azy. Midira ao ary arahabao i Blayde noho ny tsingerintaonany mba hahatonga azy hahatsapa ho sambatra kokoa!
Mandritra izany fotoana izany dia niverina tany Bahrain i Bint Battuta taorian'ny iraka fiteteza-tany nitondra azy tany Emirà Arabo Mitambatra, Italia, Angletera ary Soisa, araka izay nangoniko tao amin'ny bilaoginy.
Tafasisika tanelanelan'ireo tovovavy Maraokana tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenen'i Bahrain, taitra i Bint Batutta raha niezaka nihoa-pefy ireo tovovavy tao ambadika.
Lavitra ireo olana ao an-toerana, Haitham Sabbah, ‘Bilaogera Palestiniana ‘ monina any Bahrain, namoaka sary iray momba ny Fianakaviana Voalohany any Jordania eo am-pankafizana sakafo amin'ny alina tao amin'ny trano fisakafoanana “manetry tena” sy “feno olona” ao Amman.
Tsy fahita firy tokoa izany hita izany satria amin'ny angano ihany no mba ahitana ny fianakaviam-panjaka ao amin'ny tontolo toy izany!